सुनिता दुलाल र खुमन अधिकारीको तिज कोसेली ‘बेसी मेलैमा’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । हिन्दू महिलाहरुको महान चाड तिज नजिकिँदैछ तर यतिबेला विश्वनै कोरोनाको त्रासदीमा छ । परिस्थिती जस्तोसुकै होस् आफ्नो संस्कृतिलाई हामीले बिर्सनै सकेका छैनौं । सांस्कृतिक पर्वसँगै आफूलाई सदैव अब्बल सिर्जनामार्फत प्रस्तुत हुने गायिका हुन् सुनिता दुलाल । गायिका सुनिता दुलालले कोरोना कहरलाई चिर्दै आफ्नो नयाँ सिर्जना सार्वजनिक गरेकी छन्, ‘बेसी मेलैमा’ ।
सुनिता दुलाल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको यो गीतले मायाप्रेम मात्र होइन समाजको चित्रण पनि गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशिने गरेका युवाहरुलाई मातृभूमिमै बसेर कुटोकोदालो गर्न समेत अभिप्रेरित गरिएको छ । युवा पलायन भएपछि देशको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यही जमिनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच गीतमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस गीतमा गायिका सुनिता दुलाल र गायक खुमन अधिकारीको स्वर रहेको छ । यस गीतलाई नेत्र अर्यालले लेखेका हुन् भने खुमन अधिकारीले भाका सिर्जना गरेका छन् । गीतको सहगायनमा भने सुनितामी परियार, पुष्पा बोहरा, खेम सेन्चुरी र किरण वि.क.को रहेको छ । कृष्ण वि.क. भान्जाको संगीत संयोजन रहेको यस गीतको मिक्सिङ भने श्यामश्वेत रसाइलीले गरेका छन् ।
भिडियोमा अभिनेता दिलिप रायमाझी, अभिनेत्री नम्रता सापकोटाको अभिनय रहेको छ । भिडियोमा स्वयं सुनिता दुलाल र खुमन अधिकारीलाई पनि हेर्न पाइनेछ । ,भिडियोलाई ज्ञानेन्द्र शर्माले छायांकन गरेका छन् भने नविन निरौलाको सम्पादन रहेको छ । भिडियोको कोरियोग्राफी एवं निर्देशन शिव विकको रहेको छ ।